मन्त्री गुरुङको ८ महिना : नीतिगत सुधारदेखि बेथिति अन्त्यको प्रयास (अन्तर्वार्ता)
शनिवार, माघ १०, २०७७ युनिकोड
पाँच सय नेपाली युवालाई ईजरायलमा विशिष्ट श्रम रोजगारीको अबसर
भारतले उपलब्ध गराएको खोप तत्काल जिल्ला पुर्याउने तयारी
जनउत्थान साकोसको २० औं बार्षिक साधारणसभा सम्पन्न
कालिञ्चोक गाउँपालिकाको १ हजार रोपनी जग्गामा किवी खेती विस्तार गरिंदै
तामाकोसी नदिमा हाम्फालेकी वैतेश्वरकी महिलाको मृत्यु
दोलखाको गौरवका आयोजनाहरु पुरा गर्न कुनै कसर बाँकी राखिन्न : मन्त्री गुरुङ
भविश्य निर्माण महिला साकाेसको सााधारण सभा शुभारम्भ
कोरोना संक्रमणपछि दोलखामा वडा अध्यक्षको मृत्यु
चिनियाँ राष्ट्रपति सी भन्छन् : नेपाल-चीन सम्बन्ध पवित्र र अटल
एक प्रतिशत भन्दा बढी सेवा शुल्क लिने सहकारीलाई कारबाही
केपी ओली, प्रचण्ड, योगेश र घनश्यामहरुले यी दर्जनौं प्रश्नहरुको उत्तर देलान ?
प्रधानमन्त्री ओलीले किन बोलाए सर्बदलीय बैठक ?
पतिवियोगको ६ वर्षपछि नायिका श्वेताले सुरु गरिन् वैवाहिक जीवन (तस्बिरहरु)
अमेरिकामा गाँजा खेती र व्यापारलाई वैधता दिने कानुन पारित
दोलखाको विगु गाउँपालिकामा बोलेरो दुर्घट्ना हुँदा चालकको मृत्यु, एक जना घाईते
शुक्रवार, भदौ २६, २०७७ साझावोली न्यूज
महिला, वालवालिका तथा जेष्ठ नागरिक मन्त्री पार्वत गुरुङले मन्त्रालयको कार्यभार सम्हालेको १ वर्ष वित्न केही महिना बाँकी छ । यसबीचमा उनले सामाजिक रुपान्तरणको मुद्धालाई राष्ट्रिय गौरवको मुद्धाका रुपमा स्थापित गर्ने अभियानसँगै महिला, वालवालिका र जेष्ठ नागरिकको क्षेत्रमा नीतिगत सुधारको ठोस थालनी गरेका छन् । मन्त्री गुरुङले सामाजिक क्षेत्रमा क्रियाशिल ठुला संस्थाभित्रका बेथिति उजागार गर्दै सुधारको प्रयास पनि गरिरहेका छन् । मन्त्रीमा नियुक्त भएपछि हालसम्म मन्त्रालयबाट भैरहका कामका सन्दर्भमा मन्त्री गुरुङसँग गरिएको कुराकानी..
-भौतिक संरचना निर्माणलाई मात्र नभई सामाजिक व्यवहारलाई पनि राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाको रुपमा अघि बढाउनुपर्छ भन्ने अभियान चलाउनु भएको छ, यसको अर्थ के हो ?
विशेषत समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीको जुन राष्टिय दृष्टिकोण नेपाल सरकारले लिएर अघि बढेको छ । पन्ध्रौं राष्टिय योजना पनि हामीले हेर्यौं । विद्युत, सडक र पुर्वाधारहरुलाई मात्रै हामीले राष्ट्रिय गौरब भन्यौं । तर सामाजिक क्षेत्रको कुनैपनि विषयलाई नीति, कार्यक्रम र बजेटमा राख्न सकेनौं । जसले गर्दा समाजमा धेरै विकृत्ती, विसंगतिहरु जन्मे ।
अन्धविस्वास, कुरिती, कुप्रथा, परम्परागत मुल्यमान्यता जस्ता कुरा त्यसकै परिणाम हुन् । यस्ता विषयलाई जबसम्म सामाजिक रुपान्तरणको माध्यमबाट अन्त्य गर्न सकिँदैन तबसम्म त्यसलाई राष्टिय गौरवको आयोजनाको रुपमा स्थापित गर्न सक्दैनौं र समृद्ध नेपाल, सुखी नेपालीको परिकल्पना पनि साकार हुँदैन ।
त्यसैले अब राष्ट्रले लिएको अवधारणा र राष्ट्रिय दृष्टिकोणलाई पुरा गर्ने उदेश्य सामाजिक क्षेत्रलाई पनि राष्ट्रिय गौरवको कार्यक्रम, गेम चेन्जरको कार्यक्रम स्थापित गरेर राष्ट्रिय गौरवको रुपमा नीति, कार्यक्रम र बजेटमा ल्याउनको लागि अहिले बहस, पैरबी गरेर आधार तयार गर्न खोजिएको छ ।
-तपाई एउटा फरक राजनीतिक पृष्ठभुमिबाट आउनुभयो । हुँदाखाने र गरिखाने वर्गका लागि जिवनभर लडेर आउनुभएको, दोलखाको दुर्गम क्षेत्र र जनजाति समुदायबाट आउनुभयो, त्यो ठाउँबाट हेर्दा हाम्रो समाज केबाट जकडिएको रहेछ ?
अहिले मन्त्रीको रुपमा मैले अहिले नीति निर्माण र समाजलाई बुझ्ने अबसर पाएको छु । हाम्रो समाज हिजो दास र सतीप्रथाबाट रुपान्तरित हुँदै २१ औ शताब्दीमा आईपुग्दाखेरी अहिलेसम्म कसले के भुमिका निर्वाह गर्यो भन्ने कुराको समिक्षा गर्दै आगामी रणनीति बनाउन मलाई केही सहज पनि भएको छ । सामाजिक रुपान्तरण गर्न हामीले कहाँ योगदान पुर्याउनुपर्छ ? कहाँ समस्या छ ? र त्यसको रिभ्यु गर्ने अबसर पनि हो यो । गौरीशंकरको काखबाट राजनीतिक सुरु गर्दै गर्दा समाजमा जुन विभेद छ, समाजमा न्याय/अन्याय, धनी/गरिब, सुगम/दुर्गम, शिक्षित र अशिक्षितबीचको जुन खाडल छ, त्यो मैले आफैले देखे भोगेको छु ।
या मुद्धालाई सामाजिक रुपान्तरणको माध्यमबाट हल गर्न मैले नेपाल सरकारको तर्फबाट प्रयत्न गरिरहेको छु । केही नीति कार्यक्रम, ऐन नियम, नियमावली, निर्देशिकाहरुलाई पनि संशोधन र परिमार्जित गर्ने कामहरु अघि बढेका छन् ।
-समाजसेवालाई व्यवसाय बनाउने विकृतिले राम्रा काम गर्नेलाई पनि प्रश्न उठ्ने गरेको छ । राम्रो गर्नेलाई पुरस्कृत र नराम्रो गर्नेलाई दण्डित गर्ने विधि बनाउन मन्त्रीको रुपमा तपाई के गर्न सक्नुहुन्छ ?
समाजसेवा आफैमा उत्कृष्ट कार्य हो, तर आज समाजसेवाको नाममा, आवरणमा त्यसलाई आकर्षक पेशाको रुपमा नाफामुलक पेशाको रुपमा लिईएको छ । त्यसकारण समाजमा आझै विकृति, विसंगति, विभेद, असमानता छ । छाउपढी प्रथाले राष्टमाथि कलंक लागेको छ । अन्तराष्टिय क्षेत्रमा अहिलेपनि नेपाल छाउपढी प्रथा भएको देशको रुपमा परिचित छ । मर्यादित महिनावारी, जुन कुरा नभए सृष्टि नै हुँदैन, त्यस्तो प्राकृतिक कुरालाई छाउपढी गोठमा राखिन्छ । त्यसको अन्त्य गर्न जरुरी छ ।
मर्यादित महिनावारी अन्तराष्टिय दिवस मनाऔं भनेर संयुक्त राष्टसंघलाई पनि पत्राचार गरेका छौं । अहिलेसम्म भाषण, नीति कार्यक्रममा मात्रै आयो व्यवहारमा कार्यान्वयन गर्न सकिएको छैन, त्यो कमजोरी हो । त्यसलाई हटाउन मन्त्रीको रुपमा होस् वा नागरिकको रुपमा होस् व्यवहारमै प्रमाणित गरेर देखाउन म तत्पर छु ।
समाजसेवाको नाममा अबैध, गैरकानुनी रुपमा नाफा कमाउने, मानव बेचविखन, वालवालिका बेचविखन, धर्मपुत्र बनाएर बेचविखन गर्नेलाई दण्डित गरौं । राम्रा काम गर्नेको पनि पहिचान भएको छैन, राम्रा काम गर्नेलाई पनि नराम्राको उदाहरण दिएर निराश बनाईरहेका छौँ । त्यसैले असल गर्नेलाई पहिचान गरेर सम्मान गरौं, गलत गर्नेलाई दण्डित सजाँय र कारबाही गरौं । त्यस्ता संघसंस्थालाई खारेज गर्नेतर्फपनि लागौं । त्यो स्पीडमा काम गर्नका लागि हामी मापदण्ड, विधि बनाउने, संघसंस्थाको पहिचान गर्ने, समाजसेवामा साँच्चै कसले काम गरेको छ या छैन । त्यसको आधारमा एउटा निश्चित मापदण्ड बनाएर, अनुगमन गरेर पब्लिक अडिट गरेर, उसले गरेका गतिविधि मुल्यांकन गरेर अपडेट गर्ने प्रयासमा छौं ।
-विगत विगतमा पनि यस्ता घट्नाहरुले राजनीतिक संरक्षण पाएको, सरकारी नियुक्ती नै पाएको पनि देखियो । त्यसमा तपाई शुद्ध हुनुहुन्छ, तपाई चाँही साँच्चै गर्नुहुन्छ भनेर जनताले कसरी पत्याउने ?
म अत्यन्त आत्माविस्वास र उच्च नैतिकताका साथ बोलिरहेको छु । कुनै सस्तो लोकप्रियता वा सेलिब्रेटी बन्न यो भनिरहेको छैन । समाजमा संस्थाका नाममा जे जस्तो अबैध काम भएका छन् । जसले भ्रष्टाचार र गैरकानुनी काम गरेका छन् । ती व्यक्तिहरु अहिलेपनि राजनीति र समाजमा सक्रिय रहेको हामीले देखिरहेका छौं । जनताबाट उनीहरु बहिस्कृत छन् तर राजनीतिक दलका केही नेता र पार्टीबाट उनीहरु पुरस्कृत छन् । यो कुनैपनि हालतमा अन्त्य हुन जरुरी छ ।
-मन्त्रीज्युले नै त्यो अभियानको नेतृत्व गर्दा, राजनीतिक संरक्षणको ढोका बन्द गर्ने हिम्मत गर्दा हुन्न र ?
समयक्रममा त्यो दिनपनि आउनसक्छ । कानुनी आधारपनि चाहिन्छ । कानुनी रुपमा हिसावकिताव मिलाएर समाजलाई चमकधमक दिन उहाँहरु सफल हुनुभएको छ । हाम्रो ईन्भेष्टिगेसन पुगेको छैन । हाम्रा त्यस्तो संयन्त्रहरु छैनन् । कागजी रुपमा हिसावकिताव मिलाईसकेको अवस्थापनि छन् । हामीलाई थाहा छ, ती मान्छे बदमास र भ्रष्ट हुन् । ती मान्छे समाजको नामा कलंकित हुन् । थाहा हुँदाहुँदै पनि सहयात्रा गर्नुपर्ने परिस्थिति छ ।
-त्यो त लाचारी भयो नी ?
लाचारी होईन, कानुनी रुपमा कारबाही गर्न नसक्नेगरी कागजी प्रक्रिया मिलाईएको छ । तर समयक्रममा त्यो कुराको अन्त्य हुन्छ । यही कार्यकालमा त्यो परिस्थितिको निर्माण हुन्छ । ढाकछोप र बिभिन्न आवरणबाट राजनीतिक पार्टी, नेता र सरकारलाई विस्वस्त बनाउने पात्र छन्, ती पात्रलाई समाजले एकएक चिनिरहेको छ, मिडियाले पनि चिरफार गरेको पाउँछौ । हामीले संयुक्त अभियान पनि सुरु गर्नेछौं ।
-त्यसो हो भने तपाईको पालामा कमसेकम त्यस्ता पात्रहरुलाई प्रमाण पुगेको अवस्थामा कारबाही हुन्छ त ?
त्यसमा म विस्वस्त बनाउन चाहान्छु । यो कार्यको सुरुवात पनि गरिएको छ । रेडक्रस जस्तो परोपकारी संस्था भ्रष्टाचारमा डुव्यो, त्यसलाई परिवर्तन गर्न ५६ वर्षको कलंकको ईतिहाँसलाई रुपान्तरण गर्ने काम सुरु भएको छ । नेपाल वाल संगठनको अवस्था त्यस्तै छ । अनाथ वालवालिकाको अविभावक भनेको सरकार हो । तर संघसंस्थाले उद्धार गर्ने नाममा वार्गेनिङ गरेर, अविभावकत्व ग्रहण गरेजस्तो गरेर वेचविखनको काम भएको देखिएको छ । लोक कल्याणकारी काम त राज्यको हो नी । त्यो काम राज्यले गर्नुपर्छ ।
-रेडक्रसका पदाधिकारीले राजनीतिक नेतृत्वलाई चुनौती नै दिईरहेको अवस्थामा त्यसलाई नांगो बनाउन पत्थर फुटाएजस्तो भयो होला होईन ?
त्यो मेरा लागि निक्कै चुनौतीको रुपमा रहेको थियो । कत्तिले तिमी आफु मन्त्री पदमा रहिरहने हो भने रेडक्रस नचलाउ पनि भने । मन्त्री पद मेरा लागि अस्थायी चिज हो । जुन दिनसम्म रहन्छु, त्यो बेलासम्म गलत कुरालाई अन्त्य र रुपान्तरण गर्नु मेरो दायित्व हो । मन्त्री पद रहन्छ रहँदैन, मन्त्री पद कसले के गर्छ भन्ने कुरा त मेरा लागि प्रश्नै होईन । किनभने जनताको बीचबाट आएको मान्छेलाई फेरीपनि मन्त्री हुन जनताको बीचमा जानसक्ने मेरो हैसियत छ ।
-कहाँसम्म ती संघ संस्थाको पहँुच हुनेरैछ, तीनले कस्ता कस्ता मान्छेलाई रिझाएर सामाजिक संस्थाको आवरणमा आफ्नो खेलोफड्को गर्या रैछन् भन्ने कुराको त तपाईलाई सूचना होनी त्यो ?
त्यो एउटा सूचना र संकेत हो । त्यो मैले अनुमान नगरेको होईन । त्यो कुराप्रति सचेत भएर, मैले यो कुरा चेन्ज गर्न सकेंभने मात्रै मैलेपनि आफुलाई मन्त्री भैरहँदाखेरी केही गरे है भन्ने आत्मासन्तुष्टि पनि मिल्छ ।
-वालमन्दिरको नामा रहेको जग्गा भाडामा लिएर खानेदेखि अन्य धेरै समस्या छ । त्यो सुधार गर्न एकिकृत वालनीति ल्याउँछु भन्नुभाछ, यो विषय कतै जोडिएको छ ?
अहिलेसम्म राष्ट्रिय निर्देशक ऐन चाँही अत्यन्तै निरंकुश, त्यो संस्थालाई राज्यले पनि चलाउन नमिल्ने संस्थाको रुपमा स्थापित रह्यो । जुन हिजो राज्यसँग जोडिदै जोडिएन । नेपाल वाल संगठन, वाल मन्दिर जसरी स्वतन्त्र, स्वयत्त आफ्नै ढंगले चल्दै आयो । अहिले त्यसको नामा रहेको चलअचल सम्पति बेवारिसे छ । पार्टी कार्यालय चलाईरहेको अवस्था छ । सामाजिक संस्थाको कार्यालयलाई पार्टीको कार्यालय बनाउनु दुर्भाग्यको कुरा हो ।
कुनैपनि पार्टी कम्युनिष्ट, कांग्रेस वा समाजवादीले चलाओस् त्यो गलत हो । हिजो राजामहाराजाहरुले चलाउँदै आएको संस्थामा अहिलेको लोकतन्त्रमा पनि केही व्यक्ति राजामहाराजा भैरहने परम्परा तोड्नु हाम्रो दायित्व हो ।
-राष्ट्रिय निर्देशन ऐन त्यस्तो निरंकुश छ भने दुई तिहाई नजिकको सरकार छ, त्यसलाई फाले भैहाल्यो नी ?
त्यसको निम्ति अहिले राष्ट्रिय विकास ऐन २०१८, संघ संस्था ऐन २०३४, समाजकल्याण ऐन २०४९ लाई विघटन गरेर अब एकिकृत सामाजिक विकास ऐन ल्याउने प्रस्ताव गरेको छु । यो नीति तथा कार्यक्रम तथा बजेटमा सम्माननीय राष्टपति ज्यूले पनि सम्वोधन गरिसक्नुभएको छ । नेपाल सरकारले त्यो नीति तथा कार्यक्रम पनि ल्याएको छ ।
-त्यसो भए सरकारसँग अलगथलग भएर आफुलाई अलि छुट्टै देखाउने र कसैको निर्देशन नमान्नेके दिन गए ?
त्यस्को दिन जानुपर्छ । राज्य वलियो हुनुपर्छ । हाम्रो नेपालमा व्यक्ति भन्दा राज्य कमजोर भयो । जसका कराण हामीले अहिले यो समस्या भोगिरहेका छौ । चुनौती हाम्रो बीचमा छ । त्यसैले यो दुई तिहाई नजिकको सरकारले राज्यलाई बलियो बनाउनुपर्छ । त्यसो गरियो भनेमात्रै हामीले यो मुलुकलाई समृद्ध बनाउन सक्छौं । संस्थाको नाममा जसरी सयौं रोपनी जग्गा दिईएको छ, त्यस्ता सम्पतिको खोजी गरेर राज्यको सम्पतिको रुपमा रुपान्तरण गर्यौं भनेपनि ठुलो काम हुन्छ ।
-राज्य भन्दा व्यक्ति बलियो बन्ने प्रवृत्तिको संरक्षण चाँही प्रधानमन्त्रीले गर्ने गरेको आरोपनि लाग्छ, तपाईलाई के लाग्छ ?
ठिक छ, हामी त्यस्तो कुरा छ भने सम्माननीय प्रधानमन्त्री ज्यूलाई भन्छौं । त्यस्तो बेठिक भएको छ भने त, त्यसको अनुसन्धान गर्ने अख्तियार छ, राज्यले गर्ने कामको अनुगमन गर्ने पनि संयन्त्र छ । ती नियामक निकायले पनि प्रमाणित गर्छ भने त हामीले पनि प्रधानमन्त्रीले ठिक गर्नुभयो त भन्दैनौं होला नी त ।
-जुन एकिकृत वाल संरक्षण नीति ल्याउने घोषणा गर्नुभएको छ, त्यसमा के के हुन्छ ?
विशेषत ः अहिले वालवालिकाको क्षेत्रमा काम गर्ने धेरै छन् । छरिएर रहेकालाई एकिकृत रुपमा वाल रणनितिक कार्ययोजना बनाएर अघि बढ्नुपर्छ र जसको लागि नेपाल सरकारकै तर्फबाट एउटा त्यस्तो एकिकृत रुपमा वालवालिकाको सेक्टरमा काम गर्ने नीति बनाउनुपर्छ । एकिकृत वाल विकास ऐन, ल्याउने सोचबाट रणनितिक योजना बनाउने काम पनि सुरु भैसकेको छ ।
-महिला सामाजिक उद्यमशिलता कोष स्थापना गर्ने कुरा पनि गर्नुभाछ, त्यो कसरी अघि बढ्छ ?
अहिलेसम्म अधिकार, समानता र शसक्तिकरणका लागि काम गर्दै आयौं, अब त्यसलाई व्यवहारमा कार्यान्वयन गरेर गयौं भने अधिकारको निम्ति अब लडाई लडिरहनु पर्दैछ । अर्को आन्दोलन र अभियान चलाउनु पर्दैन ।
अहिलेपनि महिलाहरु अशिक्षित र पिडित हुने स्थितिलाई रुपान्तरण गर्न (रुढ कज) पत्ता लगाउनुपर्ने हुन्छ । रुढ कज भनेको अशिक्षा र गरिबी हो । त्यसो हो भने अब महिला आर्थिक सशक्तिकरण तिर लाग्नुपर्छ ।
-यसलाई व्यवहारमा उतार्ने काम चाँही गरौं न ?
मैले भनिरहँदा तपाईलाई भाषण जस्तो पनि लाग्नसक्छ । तर यो विषय कार्यक्रममै समावेश भैसक्यो । त्यो कार्यान्वयन भएर जान्छ । मन्त्रीको रुपमा त्यस्तो नीति कार्यक्रम ल्यायो की ल्याएन, कार्यान्वयन गर्ने दृष्टिकोण छ की छैन ? त्यो खालको सोच हो की होईन ? भन्ने हेरौं । म आफैपनि
-उद्यमशिलतासहित समाजसेवा र राजनीतिमा लागेको मान्छे हो । महिला उद्यमशिलता कसरी सफल बनाउन सकिन्छ ?
बेचिखाने भाँडा बनाए भन्ने देखेर नै अहिले प्रत्येक गाउँपालिकामा महिला उद्यमशिलता केन्द्र स्थापना गर्ने कार्यक्रम अघि बढेको छ । सहजिकरण गरेर उहाँहरुलाई आत्मानिर्भर बनाउनुपर्छ । जबसम्म महिलाहरुलाई आत्मानिर्भर बनाउन सक्दैनौं, तबसम्म ग्रामिण अर्थतन्त्रलाई बलियो बनाउन सकिँदैन । ग्रामिण अर्थतन्त्र कमजोर हुनुनै राष्ट्रिय अर्थतन्त्र कमजोर हुनु हो । आधारभुत कुरा अध्ययन गरेरै यो कार्यक्रम ल्याईएको हो ।
-कार्यक्रम बनाईयो तर टाठाबाठा र पहुँचवालाहरुको हातमा मात्रै पुग्ने भएपछि विस्वास कम भएको त हो नी ?
सरकारी अनुदान एनजिओ, आईएनजिओको अनुदान, सबै किसिमका अनुदान, अनि वित्तिय संस्थाहरुको सिएसआरको बजेट, यो सबैको उपयोग गर्ने मान्छे को ? यसमा समस्या छ । तर महिला उद्यमशिलता कार्यक्रममा हिजोको समस्या देख्नुहुन्न । यो मेरो प्रतिवद्धता हो ।
अहिले समाजमा देखिएका विकृति, विभेदहरु, लक्षित वर्गको कार्यक्रम फेरी हुनेखानेले नै उपयोग गर्यो, सूचनाको दुरुपयोग गर्यो र अबसर लुट्यो भन्ने जे विश्लेषण छ त्यसलाई सकारात्मक रुपमा लिएर सुधार्ने प्रयत्न गरौं, भन्ने आग्रह छ ।
-राज्य संयन्त्रका अधिकारीहरुको वर्ग अनुसार विभेदकारी व्यवहार, मानसिकता र कार्यशैलीमा सुधार चाँही कहिले होला ?
यसलाई रुपान्तरण गर्नुपर्छ । हामीले सूचना प्राप्त गरेसम्म कुनैपनि विपतको समस्यामा रेक्स्पोन्स गर्ने काम गरेको छौ । त्यसका लागि सम्बन्धित निकायसँग समन्वय गर्ने काम गर्छौ । तर सूचनानै छैन, मन्त्रालय, मन्त्री के हेरिरहेको छ भन्ने आलोचन पनि हुन्छ, त्यसलाई पनि हामी सकारात्मक रुपमा लिन्छौँ । सकारात्मक रुपमा सहयोग गर्नेहरुको कुरा पनि सुन्छौ । नकारात्मक र आलोचनात्मक रुपमा हामीलाई प्रश्न गर्नेहरुलाई पनि रेक्स्पोन्स गर्छौँ ।
-सडक वालवालिका मुक्त, मानव मुक्त सकड बनाउने भन्नु भाछ, तर कोभिडले थप समस्या ल्याउने देखियो, त्यसका लागि विशेष योजना हुनुपर्यो नी ?
यो कोभिडको महामारी नआईदिएको भए त्यो अभियान पुरा गर्ने र घोषणा गर्ने अवस्थामा हामी थियौ । फेरी कोभिडका कारण सडकमा वालवालिकामा देखिने अवस्था आएको छ । त्यसको निम्ति छुटै कार्यायोजना बनाएर व्यवस्थापन गर्ने काममा लाग्छौं । यो राष्ट्रिय दृष्टिकोणका साथ सुरु भएको अभियान सफल बनाउनुपर्छ ।
-जेष्ठ नारिकलाई बृद्धाश्राममा लगेर राख्ने हो या समाजमा पुर्नस्थापना गर्ने हो ? नीतिगत रुपमा परिवारसँग वस्ने वातावरण बनाउन समाज र छोराछोरीको सोचमा परिवर्तन गर्नुपर्ने होईन र ?
यसमा सहमत छु । हिजोका सबै कार्यक्रम गलत थिए भन्ने होईन । तर हिजो हामी एउटा अभियानमा सबै लाग्यौं । हाम्रा वुवाआमा, अविभावकहरुलाई सक्रिय बनाउन, जिवनभर प्राप्त गरको ज्ञान सिप उपयोग गर्ने तर्फ गएनौं । बोझको रुपमा लियौँ । अब जेष्ठ नागरिकलाई सम्मान सहित ज्ञान सिप र अनुभवलाई उपयोग गर्दै पुस्तान्तरण गर्नुपर्छ । उहाँलाई सक्रिय र दिर्घजिवी बनाउनुपर्छ । त्यसका लागि अब बृद्धाश्रम नभई ज्ञानकेन्द्र, ध्यानकेन्द्र र मिलन केन्द्रको रुपमा विकास गरेर जानुपर्छ ।
(एभिन्युज टेलिभिजनका लागि पत्रकार राजेन्द्र बानियासँगको अन्तरवार्ताको सम्पादित अंश)
प्रकाशित मिति: शुक्रवार, भदौ २६, २०७७, ०४:१७:००
नेकपा संकटबारे नारायकाजीको बिचार : पार्टी एकता किन, केका लागि र कता जाने ?
“अब कांग्रेसले देखान देख्नु हुन्न”
कोभिड-१९ बारे सुचना/कार्यक्रम अपाङ्गमैत्री बनाउनुपर्ने आवश्यकता
पाँच सय नेपाली युवालाई ईजरायलमा विशिष्ट श्रम रोजगारीको अबसर बिहिवार, माघ ८, २०७७
पाँच सय नेपाली युवालाई ईजरायलमा विशिष्ट श्रम रोजगारीको अबसर साझावोली न्यूज
भारतले उपलब्ध गराएको खोप तत्काल जिल्ला पुर्याउने तयारी साझावोली न्यूज
जनउत्थान साकोसको २० औं बार्षिक साधारणसभा सम्पन्न साझावोली संवाददाता
प्रधानमन्त्री ओलीले किन बोलाए सर्बदलीय बैठक ? सोमवार, मंसिर २२, २०७७
नेतामाथि धरपकड भएको बिरोधमा देशभर शक्ति प्रदर्शन गर्ने कांग्रेसको निर्णय शुक्रवार, मंसिर १९, २०७७
काठमाण्डौंमा प्रचण्ड-नेपाल निकट विद्यार्थीहरुको भेला, नेताहरुले गरे सम्वोधन शुक्रवार, मंसिर १९, २०७७
दोलखाका होटल व्यवसायमा आर्थिक संकट : सहज वातावरण बनाउन ध्यानाकर्षण
सुनको मुल्यमा आउन थाल्यो गिरावट, एकैदिन ३ हजार ४ सयले घट्यो
#माथिल्लो तामाकोशी जलविद्यूत आयोजना